Global Voices teny Malagasy · 21 Marsa 2011
21 Marsa 2011
Tantara tamin'ny 21 Marsa 2011
Shina: Tsy maintsy mandeha i Gaddafi (Kadhafi)
Libia 21 Marsa 2011
Ny toerna ofisialy raisin'i Shina dia ny hoe tokony horesena lahatra amin'ny fifanakalozan-dresaka sy fomba milamina maro hafa aloha i Lyiban'i Koloney Gaddafi; tsy ny rehetra any Shina no miombon-kevitra amin'izany. "Vitao ny aminy," hoy ny soratan'ilay Sinoa mpitoraka bilaogy be mpamaky indrindra manerantany.
Tonizia : Tsy nankasitrahana ny fitsidihan'i Hillary Clinton
Fanadihadihana manokana mikasika ny Tonizia taona 2011 ity lahatsoratra ity. Tao anatin'ny roa volana izay naha-voaongana ny Filoha Toniziana teo aloha Ben Ali noho ny fihetsiketseham-panoherana revolisionera, tsy latsaky ny 4 ireo tompon'andraikitra Amerikana tonga tao Tonizia : ny sekreteram-panjakana mpanampy ho an'i Afovoany Atsinanana (Moyen-Orient) Jeffrey Feltman, ny sekretera...
Azia Afovoany sy Kaokazy 21 Marsa 2011